तिथि मेरो पत्रु » तपाईंको अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल फोटो संग प्रभावित
द्वारा किम Lance
तपाईंको अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल फोटो संग प्रभावित
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 15 2020 |3मिनेट पढ्न
तपाईं फोटो को आफ्नो रुचि साँच्चै कुरा छैन आफ्नो अनलाइन प्रोफाइल संगत गर्न भनेर सोच्नु भने, फेरि विचार. तथ्यले प्रोफाइल फोटो एक अनलाइन dater दोस्रो नजर आफ्नो प्रोफाइल दिनेछु निर्धारण मा मुख्य कारक को एक छ. अनि तपाईं आफ्नो प्रोफाइल संग एक फोटो संगत छैन सोचिरहेका थिए भने, कुनै पनि प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने आशा गर्दैनौं. थुप्रै अनलाइन daters मात्र फोटो संग मान्छे को परिणाम देखाउन अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल माध्यम ले आफ्नो खोजीका निर्दिष्ट. अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल फोटो अनलाइन डेटिङ को दुनिया मा आफ्नो सफलता निर्धारण मा एक महत्त्वपूर्ण घटक छ.
तपाईंको पेट प्रतिक्रिया आफ्नो अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल लागि आफ्नो फोटो छान्ने सन्दर्भमा आफूलाई को छ सबै भन्दा राम्रो चित्र सहे हुन सक्छ. यो तपाईं आफैलाई पछि सबै अनलाइन सकेसम्म आकर्षक हेर्न बनाउन चाहन्छौं भनेर बुझन सकिन्छ, तपाईं एक तिथि सही लागि देख रहे? खैर, यो तपाईं साँच्चै हेर्न कसरी अलि धेरै प्रतिनिधि हो भनेर एक प्रोफाइल टिप्न राम्रो विचार हुन सक्छ, छैन कसरी तपाईं देख्यो इच्छा.
माथि उल्लेख, प्रोफाइल फोटो अनलाइन सम्भाव्य मिलान रूपमा अर्को दृष्टिकोण मानिसलाई वा महिला विश्वस्त मुख्य कुरा को छ. तपाईं एक फोटो अप राख्न भने सही भनेर साँच्चै हेर्न कसरी प्रतिनिधित्व गर्दैन (तपाईंको फोटो धेरै वर्ष पुरानो छ, तपाईं प्राप्त 20 आफ्नो फोटो लिएको थियो पछि Lbs, वा आफ्नो फोटो तपाईं थप आकर्षक देखाउन बदल गरिएको छ) आफ्नो मिति अनिवार्य तपाईं हेर्न कसरी गलत छाप प्राप्त हुनेछ. तपाईं व्यक्ति भेट्ने र एकदम अलग सा हेर्छ त्यो या त्यो चाहना राखेका थिए भन्दा तपाईं सही बल्लेबाजी बन्द भरोसा विषयहरूमा आफ्नो मिति निराश र विकास को एक उच्च जोखिम चलान.
त्यहि समयमा, निश्चित आफ्नो फोटो व्यावहारिक र चापलूसी दुवै छ बनाउन. के तपाईं साँच्चै हेर्न कसरी एक गलत छाप दिन चाहँदैनन् तापनि, सम्झना, तपाईं अझै पनि एक मिति प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन्. तपाईं एक बाल वा तपाईंले पार्ने-अप धारण गर्न भूल दिन लागि चार महिना अपेक्षित थिए जब समय को आफ्नो अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल मा एक तस्वीर पोस्ट नगर्नुहोस्. अझै पनि तपाईं एक राम्रो दिन मा जस्तै लाग्दैछ व्यावहारिक छाप दिंदा तपाईंको फोटो आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गुण बाहिर ल्याउन जो एक मित्र वा दुई सोध्नुहोस्.
तपाईं आफ्नो धेरै तस्बिर राख्न विकल्प छ भने, त्यसो. आफ्नो मुख्य प्रोफाइल फोटो लागि यो आफ्नो प्रोफाइल ब्राउजरहरूमा तपाईं जस्तै लाग्दैछ को एक राम्रो भावना प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर एक राम्रो टाउको र sholder शट शायद सबै भन्दा राम्रो छ. तर, आफ्नो अद्वितीय विशेषताहरु र व्यक्तित्व केही गुण देखाउन मौका यो प्रयोग गरेर धेरै फोटो विकल्प फाइदा लिन. तपाईं मजा देखाउने फोटो छान्नुहोस्, बाहिरी गतिविधिमा सहभागी, वा सुन्दर प्राकृतिक सेटिङ मा सोधेर.
थप अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल फोटो सुझाव
– अन्य मान्छे संग तपाईं को फोटो सहँदैनन्. आफ्नो प्रोफाइल ब्राउज व्यक्ति तपाईं जो व्यक्ति थाह नहुन सक्छ र अधिक तपाईं संग सोधेर व्यक्ति आकर्षित गर्न सकिन्छ.
– तपाईं आफ्नो फोटो मुस्कुराइरहेको छन् सुनिश्चित. तपाईं सम्भाव्य म्याच तपाईं सुखी र सकारात्मक सम्बन्ध सुरु गर्न तयार एक आनन्दित व्यक्ति हुन् भन्ने छाप दिन चाहनुहुन्छ.
– आफ्नो काम वा जीवित अन्तरिक्ष को बारे व्यक्तिगत जानकारी प्रकट कि फोटोहरू पोस्ट नगर्नुहोस्. तपाईं आफ्नो कार्यालय भवन एक चिन्ह देखाउने ठेगाना संग आफ्नो घर अगाडि खडा तपाईं को एक तस्वीर पोस्ट भने, के तपाईं चाहन्थे भन्दा अनलाइन डेटिङ सदस्यहरूलाई बढी जानकारी प्रकट हुन सक्छ. सकेसम्म गुमनाम आफ्नो फोटो राख्नुहोस्.
– आफ्नो फोटो छान्ने सन्दर्भमा अरूलाई चित्रण गर्न चाहनुहुन्छ के मन मा राख्नुहोस्. तपाईं पिउने वा रक्सीले मातेको चित्रहरू सहँदैनन्, क्यामेरा लगाएका, वा चरा flipping गम्भीर रोमान्टिक सम्बन्ध देख रहे भने.
तपाईं साँचो प्रेम अनलाइन पाउन सक्नुहुन्छ?
6 प्रमुख प्रश्न पनि डेटिङ पूल मा डूबा लिनुअघि आफैलाई सोध्नुहोस् गर्न
3 सुझाव उत्तम अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल सिर्जना गर्न
पहिलो डेटिङ परिचय गर्दै गरेको र don'ts गर्नुहुन्छ
तपाईं डेटिङ गरूँ किन कसैले तपाईंको प्रकार छैन हुनुहुन्छ